Qadar oo gabadh reer Netherlands ah xukuntay - iftineducation.com
iftineducation.com – Maxkamad ku taala dalka Qadar ayaa gabadh reer Netherlands ah ku xukuntay hal sano oo xabsi ah kaddib markii ay ku heshay dambi ah in ay gogol dhaaf samaysay guur la’aan, arrintan ayaa dhacday kaddib markii ay gabadhu booliiska ku wargalisay in la kufsaday.
Gabadhaas oo 22 jir ah ayaa sidoo kale lagu xukumay $824 oo ganaax ah iyo in dalka laga masaafuriyo.
Qareenka u doodaya ayaa sheegay in sharaabkii ay cabaysay wax loogu qasay iyada oo joogto hoteelkii ay ka daganayd Doha bishii saddexaad ee sanadkan ayna is aragtay iyada oo joogto dhisme kale oo leeyahay qof aysan aqoonin, halkaas oo ay ku xaqiiqsatay in la kufsaday.
Qofka lagu eedeeyay in uu weeraray oo sheegay in galmada ay ku heshiiyeen ayaa lagu xukumay 100 jeedal maadaama uu gogol dhaaf sameeyay iyadoon guur jirin.
Afartan jeedal oo kale ayuu ku mutaysan doonaa in uu khamri cabay.
Gabadhaas waxay xirnayd tan iyo markii ay eedayntaas kufsiga soo gudbisay muddo saddex bilood laga joogo, laakiin arrintan ayaa soo shaacbaxday maalmihii u dambeeyay kaddib markii qoyskeedu ay go’aansadeen in ay arrintan la wadaagaan warbaahinta Dutch-ka.